पोषकतत्वले भरिपूर्ण जमराको जुस नियमित पिउदा मुटु रोग, क्यान्सर तथा टाइप २ मधुमेहको जोखिम कम हुने दावी ! « Onlinetvnepal.com
पोषकतत्वले भरिपूर्ण जमराको जुस नियमित पिउदा मुटु रोग, क्यान्सर तथा टाइप २ मधुमेहको जोखिम कम हुने दावी !
Published :2May, 2019 12:08 pm
परम्परागत रुपमा जमरालाई हामीले दशैको टीकासंगै भेटीसहित पाउँने केही थान जमरालाई मात्रै सम्झिन्छौ । समय, विज्ञानमा फड्को, खोज र टेक्नोलोजीले गर्दा विस्तारै हामीले धेरै कुरामा अगाडि बढ्न थालेका छौ । हिजोआज विदेशमा गरिएका खोजहरु समेत हामीले आफ्नो देशमा पनि प्रयोग गर्न थालेका छौ ।
हिजोआज बढ्दो उमेरसंगै मर्निङ वाक गर्न जानेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । मर्निङ वाक गर्न नियमित जानेहरुले पक्कै पनि बाटोमा देखेको हुन पर्छ, जमराको जुस, एलोभेराको जुस, सिलाजितको झोलहरु विक्री गरिरहेको । हो, पक्कै पनि यि सवै कुराले विभिन्न रोगीलाई उपचारमा पद्यत गर्छ । बुद्धनगरस्थित यूएन पार्क भित्र नियमित सैयौ मानिस मर्निङ वाक गर्न जान्छन् । त्यहाँ भित्र जमराको जुुस, एलोभेराको जुुस, फलफूलको जुसदेखि लिएर ग्रीन टीसम्म विक्री गर्नेहरुको भीड लाग्ने गर्छ । नियमित प्रेसर, सुगर, यूरिक एसिट लगायतका विरामीले ति कुराहरु मर्निङ वाक सकिएपछि सेवन गर्ने गरेको हामी देख्न सक्छौ ।
हामी जो कोहीले विजय दशमीको दिनदेखि पूर्णीमा सम्म टिकासँगै जमरा लगाउने गर्दछौ । तर त्यो जमराको फाईदा थाहा पाउने हो भने सबै चकित हुनुहुनेछ । जौको जमरा फाइबरयुक्त गुणका कारण पछिल्लो शरिरमा चमत्कारीक फाईदा दिने तथ्य फेला परेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पोषकतत्वले भरिपूर्ण गहुँ, जौले मुटु रोग,पाचन प्रक्रिया, क्यान्सर तथा टाइप २ मधुमेहको जोखिम कम गर्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार मानिसका लागि गहुँ जति स्वस्थकर छ, उमारेको गहुँबाट बनेको जुस त्योभन्दा धेरै फाइदाजनक छ । त्यसैले गहुँको जुस पृथ्वीकै सर्वोत्कृट स्वस्थ्यकर जुसमध्ये पर्छ ।
गहुँको जुसमा उपचारात्मक, चिकित्सकीय तथा रोग निको पार्ने गुण हुन्छ । क्लोरोफिल, अमिनो एसिड, मिनेरल्स, भिटामिन ए, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, भिटामिन डी र इ को ठूलो स्रोत मानिएको गहुँको जुसमा म्याग्नेसियम, पोटासियम, आइरन, जिन्क, कपर, सेलेनियम र थाएमिन पाइन्छ । उमारेको गहुँ सामान्य तरीकाले तयार हुने भएकाले यसमा आवश्यक पौष्टिक तत्व तथा मिनेरल्स पहिले नै टुक्रिएर बस्ने हुँदा यो तुरुन्तै रक्तकोषिकाहरुमा घुल्दछ ।
कसैकसैलाई वा प्रेसर कम भएकाहरुलाई सिधै गहुँको जुस सेवन गर्दा वान्ता हुने वा टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छ । त्यतिबेला अन्य फुलफूल तथा तरकारीको रससित मिसाएर पनि यसको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । तपाई यसको धुलो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । एक गिलास पानीमा उमारेको गहुँलाई मिसाएर पनि यसको सेवन गर्न सकिन्छ ।
गहुँलाई जमरा उमारेजसरी घरमै उमारेर त्यसका पातलाई पेलेर जुस बनाउन सकिने भएकाले यसको उत्पादन गर्न सजिलो छ । विभिन्न आयुर्वे्दिक औषधालय एवं प्राकृतिक चिकित्सालयमा गहुँको जुस उत्पादन र विक्री गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो रस सेवन गर्नुका मुख्य फाइदा यस्ता छन् ?
१, मुटुमा लाभदायक स् प्रत्येक दिन गहुँको रसको सेवन गर्नु मुटुका लागि स्वास्थ्यकर मानिन्छ । यसमा भएको क्लोरोफिलले मुटुका धमनी (आर्टरी) कडा हुने समस्या तथा उच्च रक्तचापको समस्याको उपचार गर्नमा मद्दत गर्छ ।
२, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ स् शरीरका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जरुरी हुन्छ । यसले तपाईको शरीरलाई विभिन्न रोगसित लड्ने क्षमता प्रदान गर्छ । गहुँको जुसले तपाईलाई रोगसित लड्न अझ धेरै उर्जा प्रदान गर्छ ।
प्राकृतिक रुपमा उर्जा दिन्छ स् स्वास्थका दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक मानिएको यो जुसले प्राकृतिकरुपमा उर्जा प्रदान गर्छ । यो एमिनो एसिडको मुख्य स्रोत हो, जुन शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ ।
४, रगतमा चिनीको मात्रा कायम राख्छ स् प्रत्येक दिन गहुँको जुस सेवन गर्नाले तपाईको रगतमा चिनीको मात्रालाई सुचारु गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसले शरीरमा ग्लुकोज तथा लिपिडको मात्रामा सुधार गर्छ, जसले मधुुमेहलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याई पेटलाई खाना पचाउने प्रक्रियाबाट राहत दिन्छ, जसले गर्दा मधुमेहका लागि आवश्यक पर्ने इन्सुलिनका उत्पादन गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसले प्याङक्रियाज तथा कलेजोको विषाक्त हटाई अप्रत्यक्ष रुपमा मधुमेह सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
५, मोटोपना हटाउँछ स् मधुमेह, मुटु रोग लगायतका विभिन्न खाले गम्भीर रोग लाग्नुको पछाडी मोटोपना मुख्य कारक मानिन्छ । शरीरबाट अतिरिक्त बोसो हटाउन तथा शरीरको तौललाई सन्तुलनमा राख्न गहुँको जुस सेवन गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । गहुँको रसमा सेलेनियम नामक तत्व हुन्छ, जुन शरीरको तौललाई सन्तुलनमा राख्ने तत्व, थाइराइड ग्रन्थीको परिचालनको लागि आवश्यक छ । अस्वस्थ थाइराइड ग्रन्थीले शरीरमा हर्मोनको गडबढी गरी मोटोपना बढाउँछ ।
यसमा पोटासियम पाइन्छ । जसले शरीरमा पानी मात्रालाई कायम राख्न मद्दत गर्छ । गहुँको जुस सेवन गर्दाले भोक कम लाग्ने हुँदा यसले तपाई हामीलाई अस्वस्थ्यकर खाना खानबाट जोगाउँछ । यसले शरीरको मेटाबोलिज्म (खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रकृया) बढाउँछ, जसले शरीरमा भएको अतिरिक्त क्यालोरी हटाउँछ । बिहान सबेरै खाली पेटमा यो रसको सेवन गर्नाले तपाईलाई दिनभरि अतिरिक्त खाना खानबाट जोगाउँछ ।